Bib Aprons Manufacturers - Mpanamboatra Biby Biby Biby Shina
Fotsy mavokely fotsy mainty mametaka kapoaka miaraka amin'ny kitapo iray CU304S8600H
Marika CHECKEDOUT Item Code CU304S8600H habe MISY SAIZAKA Ny teny fototra amin'ny chef apron, bib apron, cotton apron, akanjo ho an'ny hopitaly Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Fanjaonana Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy avo lenta. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fihenan'ny ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny fehin-kase polyester dia miorim-paka, miaro ...
Pasetin'ny lakozia lava azo zahana miaraka amina paosy roa CU305S8600H
Marika CHECKEDOUT Item Code CU305S8600H habe tokana MISY teny fototra AN -KAF, apron an-dakozia, chef apron, akanjo ho an'ny hopitaly Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Fanjairana Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy avo. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fihenan-tena ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny fehin-kase polyester dia miorim-paka, tsy mahatohitra ...
Canvas Chef Bib Apron Amin'ny paosy telo CU335S135022U4
Marika CHECKEDOUT Item Code CU335S135022U4 Lehibe SAIZAIZY teny fototra ny chef apron, bib apron, canvas apron, ny fomban'ny fika mandray an-trano 45/55 poly / cotton GSM.300g manjaitra Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy avo lenta. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fampihenana ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorigorika, resista ...
Ny loko miloko manga Chef Bib Apron miaraka am-paosy telo CU335S048022U4
Marika CHECKEDOUT Item Code CU335S048022U4 Lehibe SAIZY Ny teny fototra amin'ny chef apron, bib apron, canvas apron, tranom-piraisan-tsakafon'ny lamba 45/55 poly / cotton GSM.300g manjaitra Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy mahery. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fampihenana ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorigorika, resista ...
Ny loko mavokely miloko mavokely apel Bibon miaraka am-paosy telo CU335S043022U4
Marika CHECKEDOUT Item Code CU335S043022U4 Lehibe SAIZY Ny teny fototra amin'ny chef apron, bib apron, canvas apron, tranom-baravarankely lamba Fabric 45/55 poly / cotton GSM.300g Fanjairana Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy mahery. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fampihenana ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorigorika, resista ...
Tafika maintso miloko mavokely miloko Bib Apron Amin'ny paosy telo CU335S042022U4
Marika CHECKEDOUT Item Code CU335S042022U4 Lehibe SAIZY Ny teny fototra amin'ny chef apron, bib apron, canvas apron, ny saram-pianakaviana manao akanjo 45/55 poly / cotton GSM.300g manjaitra Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy mahery. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fampihenana ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorigorika, resista ...
Black Canvas Chef Bib Apron Amin'ny paosy telo CU335S001022U4
Marika CHECKEDOUT Item Code CU335S001022U4 Lehibe SAIZAIZY teny fototra chef apron, bib apron, canvas apron, fandraisana olona mandray ny lamba 45/55 poly / cotton GSM.300g Fanjairana Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy mahery. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fampihenana ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorigorika, resista ...
Marika CHECKEDOUT Item Code CU352S119000AG habe MISY SAIZIANA Ireo teny fanalahidy aprily apron, apron Fabric 70/30 poly / cotton GSM.265g Fanjairana Thread Polyester dia antsoina koa hoe kofehy avo lenta. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan-tsakafo ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorikorika amin'ny fanoherana, miady amin'ny hetaheta, ary tsy kankana ...
Marika CHECKEDOUT Item Code CU352S118000AG habe MISY SAIZIANA Teny miavaka crossback apron, apron Fabric 70/30 poly / cotton GSM.265g Fanjaitra Thread Polyester kambana dia antsoina koa hoe kofehy avo lenta. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan-tsakafo ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorikorika amin'ny fanoherana, miady amin'ny hetaheta, ary tsy kankana ...
Marika CHECKEDOUT Item Code CU352S117000AG habe MISY SAIZIANA Ireo teny manan-danja miorim-paka amin'ny apron, apron Fabric 70/30 poly / cotton GSM.265g Fanjairana Thread Polyester dia antsoina koa hoe kofehy avo lenta. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan-tsakafo ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorikorika amin'ny fanoherana, miady amin'ny hetaheta, ary tsy kankana ...
Ny marika CHECKEDOUT Item Code CU352S129000T habe MISY SAIZANA Ny teny fototra COSSBACK apron, apron lamba any an-dakozia 20/80 poly / cotton GSM.346g Fanjaonana Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy avo. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan'ny rano, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorikorika amin'ny fanoherana, miady amin'ny hetaheta, ary tsy ...
Marika CHECKEDOUT Item Code CU355S134011U4 Lehibe SAIZY Teny fototra Kely teny am-bavan'ny hoditra vita amin'ny hoditra, chef apron lamba vita amin'ny kofehy vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan'ny rano, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia miorikorika amin'ny fanoherana, ny fanoherana ny hozatra, ary ...